Ntughari ohuru nke digiKam 7.0.0 abia ma ndia bu akuko ya | Site na Linux
Versiondị ọhụrụ nke digiKam 7.0.0 na-ahapụ mgbe otu afọ nke mmepe na nke ọhụrụ a guzo dị ka ihe ọhụrụ un kpam kpam redesigned ihu usoro nhazi na foto, ihe ndi ozo.
Maka ndị na-amaghị digiKam kwesịrị ịma nke ahụ nke a bụ ngwa nke etolitere n'ime usoro nke ọrụ KDE. Usoro ihe omume a na-enye akụrụngwa zuru ezu maka ịbubata, ijikwa, dezie, na ibipụta foto dị iche na onyonyo igwefoto dijitalụ. Edere koodu ahụ na C ++ na-eji Qt na ụlọ akwụkwọ KDE, ma kesaa ya n'okpuru ikike GPLv2.
1 DigiKam 7.0.0 Igodo Ọhụrụ
2 Etu esi etinye digiKam na Linux?
DigiKam 7.0.0 Igodo Ọhụrụ
A isi mma na digiKam 7.0 bụ a kpam kpam redesigned ihu nhazi ọkwa usoro na foto, na ị na-enye gị ohere ịchọpụta ma mata ihu dị na foto, ma pịa ha na akpaghị aka.
Kama nke a na mbụ ji cascade classifier si OpenCV, ụdị ọhụrụ ahụ na - eji algọridim dabere na netwọkụ dị omimi, nke mụbara nkọwa ziri ezi site na 80% gaa na 97%, mụbara ọsọ ọrụ (njikọta nke ngụkọta gafee ọtụtụ cores CPU na-akwado) ma na-ewepụta usoro ntinye aha, ịchekwa mkpa iji kwado izi ezi nke ọrụ enyere.
Ngwunye ahụ gụnyere ihe atụ azụrụrịrị iji mata ma dakọtara ihu, que ọ dịghị ọzọ ọzụzụ chọrọ: ezuola iji kpado ihu na otutu foto na sistemụ n'onwe ya ga-enwe ike ịchọpụta ma kpado ihu a n'ọdịnihu.
E wezụga ihu mmadụ, sistemụ nwere ike ịkọ ụmụ anụmanụ ma nyekwa gị ohere ịmata ihu agbagọ, bịara ikiri, megharia ma mechie ya. Ọzọkwa, emeela ọtụtụ ọrụ iji bulie ikike nke ịrụ ọrụ na aha mmado, Ngwurugwu dakọtara abawanyela ma gbakwunye ụzọ ọhụrụ iji dozie na ihu otu.
Ọganihu ọzọ nke agụnyere na ụdị ọhụụ nke digiKam 7.0.0 bụ nke ahụ Agbakwunyere nkwado maka usoro ihe oyiyi RAW 40 ọhụrụgụnyere ndị ejiri na Canon CR3 a ma ama, Sony A7R4 (61 megapixel), Canon PowerShot G5 X Mark II, G7 X Mark III, CanonEOS, GoPro Fusion, GoPro HERO * ese foto, wdg. Na mkpokọta, ekele maka ojiji nke libraw, e webatala ọnụọgụ nke usoro RAW na 1100.
Ọzọkwa nkwado maka usoro ihe oyiyi HEIF ka mma Apple iji kesaa ihe oyiyi HDR. Agbakwunyere nkwado maka usoro XCF emelitere nke ejiri na ngalaba GIMP 2.10.
Mmeju HTMLGallery na-emejuputa atumatu ohuru, Html5 na-azaghachi, iji mepụta eserese foto nke na-eme ka ekwentị na desktọọpụ rụọ. Na mgbakwunye, nsogbu ndị na-egosipụta aha mmado na ndetu na akara mkpụrụedemede edozila.
Nkwalite ndị ọzọ gụnyere:
Isi ihe a natara ngwa mgbakwunye ImageMosaicWall, nke na-enye gị ohere ịmepụta ihe oyiyi dabere na foto ndị ọzọ.
Ntinye agbakwunyere iji chekwaa ozi ọnọdụ na ihe oyiyi faịlụ metadata.
Ntinye agbakwunyere nke na-akọwa oke iji chekwaa akara agba na metadata.
Emezigharịla ihe eji eme slideShow ka ihe nkwụnye maka digiKam na Showfoto ma gbatịa ya na nkwado maka ọnọdụ ịkpọasị
N'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ịnwere ike ịkpọtụrụ ọkwa gọọmentị na njikọ na-esonụ.
Etu esi etinye digiKam na Linux?
Enwere ike ịchọta nchịkọta dị iche iche maka ịwụnye ngwanrọ na KDE.org. Maka ndị ọrụ Linux, enwere faịlụ Appimage na koodu ntinye dị njikere.
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ụdị ọhụụ a na sistemụ ha, Ha nwere ike ime ya site na nbudata faịlụ AppImage nke ha na-enye anyị na nchekwa KDE dị ka usoro nke usoro anyị si dị.
Ihe anyị ga - eme bụ imepe ọnụ na pịnye iwu dabara na ije anyị.
Maka ndị bụ ọrụ nke sistemụ 32-bit:
Ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ nke usoro 64-bit:
Ha nwere ike ịgba ọsọ ngwa ahụ site na ịpị ugboro abụọ ma ọ bụ site na njedebe na:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ntughari ohuru nke digiKam 7.0.0 biara na ndia bu akuko ya